Midowga Musharaxiinta oo cambaareeyay guddoomiyaha gobolka Banaadir - Jowhar somali news leader
Midowga Musharaxiinta oo cambaareeyay guddoomiyaha gobolka Banaadir
Qoraal ka soo baxay Midowga Musharrixiinta ayaa lagu Cambaareeyey gudoomiyaha gobolka Banaadir mowqifka uu ka istaagay banaanbax la doonayay in maanta uu ka dhaco Muqdisho.
Midowga Musharaxiinta ayaa sheegay in guddoomiyaha gobolka Banadir uu ka horyimid dastuurka Soomaaliyeed.
“Goluhu wuxuu cambaaraynaa hadalkii ka soo yeeray Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ee fal danbiyeed ku tilmaamay mudaaharaadka, oo ah xaq dastuuri ah, sida uu dhigayo qodobka 20-aad ee dastuurka dalka.:ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Midowga Musharaxiinta,
Hase yeeshee Midowga Musharaxiinta waxa ay war saxaafadeedkooda ku ammaaneen Golaha la magac baxay Golaha bulshada iyo duqeyda dhaqanka gobolka Banaadir.
“Golaha Midowga Musharraxiinta wuxuu uga mahadcelinayaa Golaha Bulshada Banaadir (GBB) aqbalka codsigii kaga yimid Odayaasha Dhaqanka Muqdisho iyo Midowga Murashaxiinta ee ahaa in dib loo dhigo mudaaharaadkii uu GBB qaban lahaa maalinta Khamiista ah 13/01/22.”
Midowga Musharaxiinta ayaa ugu dambeyntii ka codsaday xukuumada Soomaaliya inay ilaaliso xuquuqda muwaadinka soomaaliyeed.
”Goluhu wuxuu uga mahadcelinayaa Xukuumadda Ra’iisul Wasaare Maxamad Xuseen Rooble in ay gudatay waajibkii kaga aaddanaa muddaaharaadka, waxaayna mar kale ku adkaynayaan Xukuumadda in ay ilaaliso xuquuqda muwaadinka, xilna iska saarto furitaanka saaxadda siyaasadda oo ay ugu horrayso xorriyadda mudaaharaadka, kulammada, ololaha, safarka iyo in warbaahinta qaranka oo loo oggolaado Musharrixiinta.
Guddiga Hirgelinta Doorashada Koofurgalbeed oo shaaciyay qabashada 5 kursi oo Golaha Shacabka ah